IMotorola Moto One: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuSungulwa | I-Androidsis
IMotorola Moto One: I-brand yokuqala ye-Android yokuqala
Sibe kunye ukuvuza okuninzi malunga neMoto Moto One, ifowuni yokuqala yenkampani yokusebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza. Okokugqibela, ngolu suku lokuqala lwe-IFA 2018, isixhobo sinikezelwe ngokusemthethweni. Ukucaciswa kwayo kunye noyilo sele zivuziwe, kwaye ngoku lixesha lokujonga ukuba zilungile na okanye hayi.
I-Motorola Moto One iboniswa njengefowuni ekumgangatho ophakathi. Singayithatha njengokhuphiswano lweefowuni ezinje ngeXiaomi Mi A2 kunye neA2 Lite. Ke unokhuphiswano olunzima kwintengiso. Kodwa i-Motorola yinkampani ethandwayo ngabathengi.
Ke ngoko, sijamelene nefowuni ezalisekisa injongo yayo, uyilo lwangoku kunye nangaphezulu kokubalulwayo okwamkelekileyo. Njengoko yayivuza ifowuni ivula isikrini inotshi, kuyenza icace into yokuba izokuhlala emarikeni.
1 Ukubalula Motorola Moto One
Ukubalula Motorola Moto One
Yintoni eyothusayo ngale Motorola Moto One yile ukhethe ukuyila ngomzimba weglasi. Kuba le ihlala iyinto ebekelwe isiphelo esiphezulu. Kodwa inkampani ifuna uyilo olusemgangathweni, into ebonakalisiweyo kule fowuni. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-LTPS IPS 5,9 intshi nge-HD + isisombululo (1520 x 720 intshi) kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 625
Ukugcina ngaphakathi: I-64 GB (Iyandiswa nge-MicroSD)
Cámara traseraI-13 + 2 MP nge-f / 2.0 ukuvula, i-Flash ye-LED kunye nevidiyo ye-4k @ 30fps
Ikhamera yangaphambiliI-8 MP ngokuvula f / 2.2 kunye nefleshi ye-LED
Ibhetri: 3.000 mAh + Turbopower
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo uHlelo olunye
UbukhuluUbukhulu: 150 x 72 x 7.97 mm
U bunzima: I-162 g
Conectividad: I-Bluetooth 4.2, i-WiFi 802.11n, i-GPS / i-GLONASS / iGalileo, i-USB Type-C
abanye: NFC, P2i ukumelana, isivamvo somnwe, iRadioFM
Siyabona ukuba icandelo elikhulu leemodeli zalo modeli lalikhe lavuza ngaphambili. IMotorola ikhethe inotshi, Njengolunye uphawu, njengendlela yokwandisa ubungakanani bescreen sefowuni. Yintoni eyothusayo okanye edanisayo kukhetho lweprosesa yesixhobo.
I-Snapdragon 625 yiprosesa elungileyo, esebenza kakuhle, kodwa ikwindawo yentengiso ixesha elithile. Nokuba iQualcomm ngokwayo ibazise iindlela ezintsha kolu luhlu, ezinokuthi zibonelele ngokusebenza ngcono. Ke incinci "kodwa" ekufuneka ibekwe kule Motorola Moto One. Nangona ingafanele kuchaphazela ukusebenza kwesixhobo kakhulu.
Enye into eya kuvelisa izimvo kwisixhobo ibhetri. Kuyamangalisa ukuba amandla ayo yi-3.000 mAh, enqabileyo kwabaninzi. Nangona inkampani iqinisekisa ukuzimela ngokwaneleyo ukuze ikwazi ukusebenzisa ifowuni imini yonke. Kuza nombulelo wokutshaja ngokukhawuleza kwitekhnoloji yeTurbbower, Enkosi apho kuya kubakho ukufumana iiyure ezintandathu zokuzimela kwimizuzu engama-20.
Inyaniso yokuba i-Motorola Moto One isebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza kuthetha ukuba iya kuba yenye yeefowuni zokuqala ukufumana uhlaziyo kwiPie ye-Android 9.0 ngela xesha lasungulwa. Ukongeza ekufumaneni uhlaziyo lokhuseleko rhoqo. Kule meko, ziya kuba zi patches zenyanga kubasebenzisi. Okwangoku ayaziwa ukuba olu hlaziyo luza kufika nini emnxebeni.
Kule meko, Sijongene nohlobo olunye lwale fowuni yokuqala yeMotorola ene-Android One. Inguqulelo ene-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Mnye kuphela umbala okhankanyiweyo apho le modeli izakufumaneka khona, njengoko ubona kwimifanekiso, mnyama. Nangona kulindeleke ukuba kubekho imibala emininzi, nangona kungekho nto iqinisekisiweyo.
Akukho mihla inikiweyo yokwaziswa kwayo. I-Motorola Moto One kuye kwathiwa iyahlasela amazwe aseYurophu, eLatin America nase-Asia kwiinyanga ezizayo. Ke kulindeleke ukuba oku kuwa / ubusika buza kubakho ngoku. Iya kwenza njalo ngexabiso lama-euro angama-299, engalunganga ngokujonga ii-specs zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IMotorola Moto One: I-brand yokuqala ye-Android yokuqala
I-Casio Pro Trek WSD-F30: I-smartwatch yolonwabo
Hlonipha umlingo 2: Isiphelo esiphakamileyo sembeko sihlaziyiwe